Burburiyo Qasriga uu la wareegay shimbiraha careysan si uu u burburiyo qalcado | Androidsis
Manuel Ramirez | | Shimbiraha cadhooday, burburi Candy, Ciyaaraha Android
Burburi Qasriga: Master Siege waa wax «shimbiro careysan» taas oo ay tahay inaan ku burburinno boqolaalka qalcadaha cadawga ee aan ka heli doonno. Ciyaar ku saleysan fiisigiska walxaha si loogu raaxeysto sida cows marka aan aragno sida ay u qarxaan dhammaan darbiyada iyo leerarka qalcadahaas quruxda badan
Cinwaan ay sii daayeen Ciyaaraha Hubka ee Google Play Store si loo qaato usha ka hadhay Shimbiraha Xanaaqsan oo waxaad siisaa maroojin ciyaartaas aad isla markiiba aqoonsan doontid. Waana la ogaan karaa in cilmiga fiisigiska walxaha laga shaqeeyay si xaaladaha soo noqnoqoshada leh ay u kala soocnaadaan, sida dhammaan walxahaas oo ku dhici doona qofka ugu horreeya aragtidayada ugu dambeysa.
1 Ciyaar gebi ahaanba baabba 'ah
2 Ku burburi Qasriga: Siege Master oo ah xujo mashruuc ah
3 Ciyaar ka mid ah kuwa lagu riyaaqay
Ciyaar gebi ahaanba baabba 'ah
Burburi Daarta: Master Siege si fiican u ciyaar dhamaan kaararka inuu isagu haysto si uu noogu keeno farsamo yaqaanno caan ah oo ciyaarta yaqaan (iyo in aan seegnay), laakiin inaad gelisay burburka qalcadahaas cadawga ah, runta ayaa ah inay keento dareen aad u wanaagsan daqiiqadaha ugu horeeya ciyaarta.
Asal ahaan waa inaan sameynaa u isticmaal alaab-gacmeedka awooddeenna si aad u soo saarto dhagaxyo waaweyn (Waxaan xitaa ku tuuri karnaa iyaga weyn) tiirarka qalcadahaas cadowga ah. Waxaan riixeynaa shaashadda hal mar si aan udhaqaajino howsha bilaabida, si aan u sameysano saxaafad kale, kaliya waqtigaan aragno sida ugu haboon ee qalooca dhabbaha si loogu oggolaado dhagaxa weyn in la dhammeeyo, haddii ay noqon karto mid keliya , oo leh tiirarka qalcaddii cadowga.
Markaa waan tagi doonaa dhoola cadee markaan aragno sida dhagxaanta qaar saameyn ugu yeeshaan ka soo horjeedka munaaradaha cadowga iyo qalfoofkaas oo dhan, aad ayey u qabow yihiin, waxay ku dambeeyaan dhulka iyagoo ku qarxay bambo meesha ka muuqatay. Runtii barta ugu weyn ee Burburinka Qasriga: Master Siege waa kala sooc la'aanta kuwa la bilaabay iyo saamaynta ay ku yeelan doonaan dhismayaasha cadowga.
Ku burburi Qasriga: Siege Master oo ah xujo mashruuc ah
Oo halkan waxaan la nimid Crush the Castle: Siege Master, ciyaar halxiraale taas oo aan ku bilaabi doonno qiyaas wanaagsan dhammaan daahfurkayaga si aan u garaacno qodobbada muhiimka ah ee dhammaan dhismayaashaas dhagaxa ah ee horteenna ka kici doona.
Tan kaliya maahan, laakiin heerarka qaar waxay ka koobnaan doonaan dhowr qalcado oo aan wajihi doono tiro kooban oo dhagax ah. J) Haa Waxaan ka heli doonnaa dhibaatada ugu weyn ee Burburka Qasriga: Siege Master. Taasi waa in la yiraahdo, bartamaha toogashada si fiican oo aan ula helno awoodda ugu badan ee saameynta iyo burburka.
In kasta oo aan arki doonno cadaawayaashaas oo dhan oo dhacaya. Waan is arki doonnaa sidoo kale ka caawiyey xirfado kala duwan taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan soo bandhigno suurtagal weyn oo waxyeello ah. Waxaa muhiim ah inaan u keydinno xirfadahaas qalcadahaas qaab dhismeedyo aad u adag leh waxayna u baahan doonaan caawimaad dheeri ah si ay u awoodaan inay baabi'iyaan.
Ciyaar ka mid ah kuwa lagu riyaaqay
Ugu dambeyntii, la burburi Castle: Master Siege waxaan heli doonaa waqti aad u fiican, Maaddaama makaanikada ciyaarta lafteeda ay gacan ka geysato ciyaar kasta inay ahaato mid ka duwan oo xitaa waxaan ku qosli karnaa dhicitaanka cadaawayaashaas oo aad u xiiseynaya.
Farsamo ahaan waa tobankiiba toban, gaar ahaan walxaha fiisikiska taas oo lagu gaadhay si heer sare ah. Waa arrin aad u xasaasi ah xilligaas oo uu bam qarxo oo uu qaado dhagaxaanta qalcadaha iyo askartaas cadowga ah. Waxaan xitaa arki doonnaa sida ay u toogtaan inay cagaheenna ka dhacaan. Jaantus ahaan iyo qaabeynta waxay sidoo kale ka shaqeeyeen sidii loo dhameystiri lahaa ciyaar aad u wanaagsan oo si bilaash ah loogu raaxeysto.
Burburi Qasriga: Siege Master waa ciyaar ku jirta qaabka ugu fiican "Shimbiraha Xanaaqsan" Taas oo aad lahaan doonto wax ka badan dhowr maalmood oo aad ugu raaxeysan karto Kirismaskan kaabiga ku haya Waxaan idhi, waxaad ku haysataa bilaash Google Play Store. Marka durba waqti ayey qaadaneysaa in la tijaabiyo. Waxay ka mid yihiin cayaarahaas oo maareeya in ay ku sii jiraan xusuusta gudaha taleefankayaga muddo dheer.
Fiisigis shey weyn
Si fiican loo qaabeeyey guud ahaan
Ciyaar kale oo aan loo habeynin 18: 9 shaashado
Burburi Daarta: Master Siege
Developer: Ciyaaraha hubka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Burburiyo Qasrigu waa "Shimbiro careysan" oo buuxa oo aad ku burburinayso qalcado